अमेरिका बाट नेता र नेताका कार्यकर्ता हरुले केही सिक्ने हो कि?? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिका बाट नेता र नेताका कार्यकर्ता हरुले केही सिक्ने हो कि??
प्रदेशको राजधानीबारे अमेरिकी अनुभवः ठूला शहर ‘हानिकारक’
यस्तो छ अमेरिकी राज्यहरुको राजधानी र विकेन्द्रीकरण
अमेरिका आफैंमा देश नभएर महादेश हो । यो झण्डै सिंगो युरोपजत्रै छ । सम्पूर्ण युरोपको क्षेत्रफल १,०१,८०,००० वर्ग किलोमिटर छ भने अमेरिकाको चाहिँ ९८,३३,००० बर्ग किलोमिटर छ । यत्रो ठूलो भूक्षेत्र भएकाले र इतिहासमा भिन्नभिन्न स्वामित्वमा रहेका भूभागहरुको एकीकृत स्वरुप भएकाले, अमेरिका जन्मँदै संघीय संरचनामा जन्मिएको मुलुक हो ।
अमेरिकाको भव्यता र विकासको आधार भनेको समानुपातिक विकासे अवधारणा पनि हो । यत्रो ठूलो भूगोलमा हरेक सानो स्थानीय इकाईसम्म सरकारको उपस्थिति र सरकारी कामको विकेन्द्रित प्रकृति नै यहाँको एकदम उत्कृष्टता पनि हो । धेरै ठूलो देश भएकाले, अमेरिकाका धेरै राज्यहरु ठूला छन् ।
अलास्काको क्षेत्रफल १४,७७,९५३ वर्ग किलोमिटर छ, जुन नेपाल भन्दा झण्डै १० गुणा ठूलो हो । तर, ध्रुबीय प्रदेश भएकाले यहाँ एकदम थोरै जनसंख्या छ । अमेरिकाको मूलभूमिमा टेक्सास सबै भन्दा ठूलो राज्य हो, जसको क्षेत्रफल ६,७६,५८७ वर्ग किलोमिटर छ, जुन नेपालभन्दा झन्डै ४.६ गुणा ठूलो हो ।
३७ वटा राज्यको क्षेत्रफल १ लाख वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी छ । यसबाट नै अञ्दाज हुन्छ, अमेरिकी राज्यहरुको बनावट । यहाँका राज्यहरुको राजधानी कसरी राखिएको छ र सरकारी कार्यालयहरुको व्यपस्थापनको कुरा नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।
राज्य र यसका राजधानीहरुको कुरा गर्दा जनसंख्या मात्र राज्य होइन, भूगोल पनि राज्य हो भन्ने सापेक्षिक अर्थ अमेरिकाको संघीय राज्यहरुको राजधानी हेर्दा महसुस हुन्छ । झण्डै २५० वर्ष अगाडिदेखि राज्यहरु निर्माण सुरु भएको हो । त्योबेला गरिएका निर्णयहरु अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
राज्यको राजधानी निर्धारण गर्दा बढी जनसंख्यालाई आधार मानिएको देखिँदैन । ठूलो भूगोल भएकाले समानुपातिक विकासको सिद्धान्तलाई आधार मानिएको देखिन्छ । सामुद्रिक किनारा छेउमा बढ्दो सहरीकरणले गर्दा टाढा–टाढाबाट बसाइँ सराइ बढ्ने, रोजगारीको समानुपातिक विकास नहुने भएकाले, ठूला सहरहरुमा राजधानी नराखी भूगोलको बीचमा पर्ने गरी र तुलनात्मकरुपमा साना सहरहरुमा राखिएको पाइन्छ ।
ठूला सहरहरुमा यसै पनि प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरु छन्, त्यहाँ अझै सुबिधा थप्दा अन्य क्षेत्रबाट बसाइ सराइको चाप बढ्ने र दुरदराजका गाउँहरु रित्तिदै जान्छन् र मानव शून्य अवस्थामा पुग्छन् भनेर यो कुरा विचार गरिएको छ ।
संसारकै ठूलोमध्ये एउटा न्युयोर्क शहर न्युयोर्क राज्यमा पर्छ । तर, न्युयोर्क राज्यको राजधानी न्युयोर्क चाँहि होइन, अल्बानी हो
संसारकै ठूलोमध्ये एउटा न्युयोर्क शहर न्युयोर्क राज्यमा पर्छ । तर, न्युयोर्क राज्यको राजधानी न्युयोर्क चाँहि होइन, अल्बानी हो, जुन न्युयोर्क सहर भन्दा झन्डै ३०० किलोमिटरको दुरीमा छ । वाशिंगटन राज्यको ठूलो सहर सियाटल हो, यहाँ ओलम्पिक खेल पनि भएको हो, तर वाशिंगटनको राजधानी झण्डै १५० किलोमिटर टाढा ओलम्पिया भन्ने ठाउँमा छ । अर्को ठूलो राज्य क्यालिफोर्नियाका ठूलो सहर सान फ्रान्सिस्को र लस एञ्जलस हुन्, तर राजधानी रहेको सहर साक्रामेण्टो सान फ्रान्सिस्कोबाट १५० किलोमिटर र लस एञ्जलसबाट ६४० किलोमीटर टाढा छ ।
कतिपय राज्यका ठूला सहरहरु राज्यको बीचमा परेको अवस्थामा त्यही सहरमा पनि राजधानी राखिएको छ । जस्तै–जर्जियाको एट्लाण्टा ।
तलको चार्टमा केही राज्यको राजधानी र त्यस राज्यको ठूलो सहर अनि तिनीहरुको बीचको दुरी उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकी राज्यहरूको राजधानी र ठूला सहरवीचको दुरी राज्य	राजधानी	ठुलो सहर	ठुलो सहर र राजधानीको दुरी
न्युयोर्क,	अल्बानी,	न्युयोर्क,	सबैभन्दा ठूलो सहर न्युयोर्कबाट ३०० किलोमिटर टाढा
साक्रामेण्टो	सान फ्रान्सिस्को, लस एञ्जलस	सान फ्रान्सिस्कोबाट 150 किलोमीटर र लस एञ्जलस बाट 640 किलोमीटर टाढा
वाशिंगटन	ओलम्पिया	सियाटल	150 कि मि
मोन्टगोमरी	बिर्मिङ्घम	160 कि मि
अलास्का	जुनु	अङ्ग्कोरेज	1,400 कि मि
फ्लोरिडा	तलाहासी	मियामी, ज्यक्सन्भिल	800 कि मि
इलिनोइ	स्प्रींगफिल्ड	सिकागो	350 कि मि
कन्सास	टोपेका	विचिता	250 कि मि
केन्टकी	फ्र्यान्कफर्ट	लुइस्भिल	100 कि मि
लुइजियाना	बार्टोन रग	न्यु ओर्लियन्स	140 कि मि
मेइन	अगस्टा	पोर्टलेण्ड	100 कि मि
मेरिलेण्ड	अन्नापोलिस	बाल्टिमोर	55 कि मि
मिनेसोटा	सेन्ट पल	मिनियापोलिस	35 कि मि
मिजौरी	जेफर्सन सिटि	कन्स्यास सिटि	275 कि मि
मोण्टाना	हेलेना	बिल्लिङ्ग्स	400 कि मि
नेब्रास्का	लिंकन	ओमाहा	100 कि मि
न्यु ह्याम्प्शायर	कोङ्कर्ड	म्यानचेस्टर	45 कि मि
न्यु जर्जि	ट्रेण्टन	न्युअर्क	100 कि मि
नर्थ क्यारोलिना	रयाले	सार्लोट	275 कि मि
नर्थ डकोटा	विस्मार्क	फार्गो	325 कि मि
ओहायो	कोलम्बस	सिन्सिनाती, क्लिभ्लेण्ड	200 कि मि
ओरेगन	सलेम	पोर्टलेण्ड	100 कि मि
पेन्सिलभेनिया	ह्यारिस्बर्ग	फिलाडेल्फ़िया	180 कि मि
साउथ क्यारोलिना	कोलम्बिया	चार्ल्स्टन	200 कि मि
साउथ डकोटा	पियरि	सिउक्स फ्लक्स	375 कि मि
टेक्सस	अस्टिन	ह्युस्टन	275 कि मि
भर्मोण्ट	मोन्टपेलियर	बर्लिङ्गटन	70 कि मि
भर्जिनिया	रिचमण्ड	नोर्फोक	160 कि मि , उत्तरी भर्जिनिया मा बाक्लो बस्ति छ, त्यहाँ बाट पनि उस्तै दुरी पर्छ
वाशिंटन	ओलिम्पिया	सियाटल	150 कि मि
वेस्ट भर्जिनिया	चार्ल्स्टन	हन्टिंगटन	90 कि मि
विस्कनसिन	म्याडिसन	मिल्वाकी	150 कि मि
मान्छे जहिले पनि सम्भावना र अवसरको खोजीमा रहिरहने हुनाले बसाइँ सराइ जहिले पनि भइरहन्छ । अवसर सबैतिर प्राप्त हुने स्थितिमा जाने र आउने क्रम उस्तै हुनाले जनसांख्यिक असर कम पर्छ । तर, सबै अवसर एकै ठाउँमा थुपार्ने हो भने समयको अन्तरमा गाउँहरु झन् निर्जन हुँदै दुरदराज मान्छेबिनाको ‘भुत गाउँ’ हुने खतरा हुन्छ ।
अर्को अचम्मको कुरा के छ भने राजधानी भनेर राख्दा सबै कुरा केन्द्रीकृत हुन्छ भनेर कतिपय राज्यस्तरीय कार्यालयहरु विभिन्न ठाउँहरुमा राखिएको हुन्छ । राजधानी भएको ठाउँमा संसद चाहिँ हुन्छ, तर राज्यस्तरीय अदालत र अन्य राज्यस्तरीय कार्यालय चाहिँ हुन्छन् भन्ने छैन । जस्तै–क्यालिफोर्नियाको राजधानी साक्रामेण्टो हो तर, उच्चअदालत १५० किलोमीटर टाढा सान फ्रान्सिस्कोमा छ । केन्द्रीय मन्त्रालय र विभागका कार्यालयहरु राज्यभरिका विभिन्न सहरहरुमा आवश्यकताअनुसार छरिएका छन् ।
सबै अवसर एकै ठाउँमा थुपार्ने हो भने समयको अन्तरमा गाउँहरु झन् निर्जन हुँदै दुरदराज मान्छेबिनाको ‘भुत गाउँ’ हुने खतरा हुन्छ
राज्यस्तरीय कार्यालयहरु सिधै जनसम्पर्कका कार्यालयहरु हुँदैनन् सामान्यतया । तर, पनि त्यहाँ हुने रोजगारीले त्यस स्थानको आर्थिक चक्रमा प्रभाब पारेको हुन्छ । अमेरिकामा कुनै पनि राज्यको राजधानी यस्तो छैन, जहाँ सबै राज्यस्तरीय कार्यालयहरु एकै ठाउँमा होउन् । राज्यभित्र पनि हरेक कुराहरुलाई समानुपातिक तरिकाले छरेर राखिएको छ । कर्मचारीहरुको बसाइले त्यस ठाउँको आर्थिक प्रणाली असर पर्ने हुनाले सकेसम्म छरिएको हुन्छ ।
जनसम्पर्कका कार्यालयहरु पनि सामान्यतया सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ८ बजेदेखि ५ बजेसम्म दैनिक ९ घण्टा र शनिबार ८ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म ४ घण्टा गरेर साप्ताहिक ४९ घण्टा सेवा दिन्छन् । कर्मचारीको त्यहीअनुरुप रोटेसन मिलाइएको हुन्छ । त्यो समयको फ्रेममा जुनसुकैबेला पनि सेवा उपलब्ध हुन्छ । सेवा दिने कर्मचारी बाहिर निस्कँदा सट्टामा काम गर्ने अर्को कर्मचारी अघि आइसकेको हुन्छ । धेरैजसो काम त अनलाइनमै गर्ने भएको हुनाले अहिले झन सजिलो नै छ ।
केन्द्रीय सरकारको कामको विकेन्द्रीकरण
सबैलाई लाग्न सक्छ, अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डीसी भएकाले केन्द्रीय सरकारका काम त्यही मात्र हुन्छन । तर, यो सत्य होइन । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा पासपोर्ट बनाउन, निवेदन बुझ्नका लागि हुलाकमा बुझ्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सबैले बुझाउने स्थानीय हुलाकमा नै हो ।
पासपोर्ट इस्यु गर्ने सेन्टरहरु वाशिंगटन डीसीमा छैनन् । देशभरि २७ ठाउँबाट मात्रै पासपोर्टको काम हरु हुन्छ । अनि केन्टकी र न्यु ह्याम्प्सायर दुृई ठाउँमा भिसाको काम हुन्छ, जुन राजधानीभन्दा हजारौं किलोमिटर टाढा छन् ।
अमेरिकामा कुनै पनि राज्यको राजधानी यस्तो छैन, जहाँ सबै राज्यस्तरीय कार्यालयहरु एकै ठाउँमा होउन् । राज्यभित्र पनि हरेक कुराहरुलाई समानुपातिक तरिकाले छरेर राखिएको छ
अमेरिकाका लागि बुझाइएका सबै भिसा को फारम त्यसको प्रकृति हेरी या त केण्टुकी पुग्छ, या न्यु ह्याम्प्सायर पुग्छ । केण्टुकी र न्यु हम्प्सायरका ती ठाउँहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा आर्थिक लाभ लिएका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकाका क्यालिफोर्निया, नेब्रास्का, टेक्सास, भर्मण्ट र भजिनियामा नागरिकता र आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्नका लागि ५ ठाउँमा सर्भिस सेन्टरहरु छन् । यी कुनै ठाउँमा पनि आफू जान पर्दैन, सबैमा अनलाइन अथवा हुलाकबाट बुझाउनुपर्छ ।
राज्य सरकारले स्वास्थ्य सेवा र उच्च शिक्षामा उच्च लगानी गरेको छ । विश्वविद्यालयहरु पूर्ण सरकारी हुँदैनन् । स्टेट युनिभर्सिटीहरुमा राज्यको लगानी हुन्छ र बोलीचालीको भाषामा सरकारी विश्वविद्यालय भनेर बुझिन्छ । तर, नेपालको जस्तो पूर्ण सरकारी चाहिँ हुँदैनन् । विश्वविद्यालयले केही निश्चित अनुदान मात्र पाउने हो ।
अमेरिकामा पासपोर्ट बनाउन, निवेदन बुझ्नका लागि हुलाकमा बुझ्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सबैले बुझाउने स्थानीय हुलाकमा नै हो
धेरैजसो विश्वविद्यालयहरु ठूला शहरभन्दा बाहिर छरिएका हुन्छन् । ती विश्वविद्यालयको शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालाको कारणले त्यहाँ सानो सहर नै निर्माण भएको हुन्छ । बोलीचालीको भाषामा त्यस्तो ठाउँलाई युनिभर्सिटी सीटी भनिन्छ । यसले गर्दा धेरै पर कुनै गाउँमा सहरीकरण भएको हुन्छ, अवसर पुगेको हुन्छ, सहर को भिड र कोलाहल पनि कम भएको हुन्छ ।
अमेरिकाका धेरै विश्वविद्यालयको ठेगाना हेर्नुस् तीमध्ये धेरैजसो चाहिँ केन्द्रीय राजधानी, राज्यको राजधानी अथवा नाम चलेका ठूला सहर मा नभएर धेरै पर, सानो ठाउँमा छन् ।